I-Biology Prefixes kunye ne-Suffixes: -sroph okanye -trophy
I-affixes (i-troph kunye -trophy) ibhekisela ekutheni, ukutya okunokondla , okanye ukufumana ukutya. Ivela kwi-Greek trophos , oku kuthetha umntu odlayo okanye unondla.
Amazwi aphelayo: (-troph)
I-Autotroph (i- auto- troph): isilwanyana esilungisayo okanye esakwazi ukuvelisa ukutya kwayo. Iipotrophe ziquka izityalo , i- algae , kunye nezinye iibhaktheriya. Ama-autotrophs ngabavelisi kwietyuniti zokutya .
I-Auxotroph (auxo-troph): ubunzima be-microorganism, ezinjengebhaktheriya, eziye zatshintsha kwaye zineemfuno zondlo ezihluke kumxhamo womzali.
I-Chemotroph (i-chemo-troph): umzimba onokufumana izondlo ngokusebenzisa i-chemosynthesis (i-oxidation yezinto ezingaqhelekanga njengomthombo wamandla ukuvelisa umcimbi wobomi). Ininzi i-chemotroph iibhaktheriya kunye ne- archaea ehlala kwiindawo ezinzima kakhulu. Ziyaziwa ngokuba yi- extremophiles kwaye ziyakhula kwiindawo zokuhlala ezitshisa kakhulu, ezinomsoco, ezibandayo okanye ezinobisi.
I-Embryotroph (embryo-troph): zonke izondlo ezinikezwa kwimibungu yama -mammalian, njengokutya okuvela kumama nge-placenta.
I-hemotroph (i- hemo- troph): izinto ezinesondlo ezinikezwa kwimibungu yamamalia ngokunikezelwa kwegazi ngumama.
I-heterotroph ( hetero- troph): isilwanyana, njengesilwanyana, esithembela kwizinto eziphilayo zokutya. Ezi zityalo ziyabathengi kwizicwangciso zokutya.
I-Histotroph (i-herto-troph): izinto ezinomsoco, ezinikezwa kwiimbrus zamamalia, ezivela kwiisisu zomama ngaphandle kwegazi .
I-Metatroph (i-meta-troph): isilwanyana esidinga imithombo enesisombululo se-carbon ne-nitrogen ekukhuleni.
I-Phagotroph ( phago- troph): isilwanyana esifumana izondlo nge-phagocytosis (ingxube kunye nokutya inyama).
I-Phototroph (ifoto-troph): umzimba onokufumana izondlo ngokusebenzisa amandla okukhanya ukuguqula into engabonakaliyo kwi-organic matter ngokusebenzisa i- photosynthesis .
IProtroph ( proto- troph): i-microorganism eneemfuno ezifanayo zesondlo njengomdla womzali.
Amagama aphelayo: (-krophy)
I-Atrophy (i-trophy): ukuchithwa kwelungu okanye izicubu ngenxa yokungabikho kokutya okanye umonakalo wamantongomane . I-Atrophy nayo ibangelwa ukusabalalisa okungahambi kakuhle, ukungasebenzi okanye ukungabikho komzimba, kunye ne- apoptosis eseleyo .
I-Dystrophy (i- dys -trophy): i-disordative disorder, ngenxa yokutya okungonelanelekanga. Kwakhona kubhekisela kwiisethi zeengxaki ezibonakaliswe ubuthakathaka obuthathaka kunye ne-atrophy (i-muscular dystrophy).
I-Eutrophy ( eu- trophy): ibhekisela kuphuhliso olufanelekileyo ngenxa yokutya okunempilo.
I-Hypertrophy (hyper trophy): ukukhula ngokweqile kwilungu okanye izicubu ngenxa yokwanda kwiseli yeseli , kungekhona kumanani eseli.
I-Myotrophy ( myo- trophy): ukondla kwezihlunu.
I-oligotrophy (i-oligo-trophy): imeko yesondlo esisweleyo. Ngokuqhelekileyo ibhekiselele kwimeko yendalo yamanzi engenako izondlo kodwa inezinga elingaphezulu kwe-oksijini.
I-onychotrophy (onycho-trophy): ukondliwa kwezipikili.
I-Osmotrophy (osmo-trophy): ukufumana izondlo ngokubambiswa kweemveliso ze-organic by osmosis .
I-osteotrophy (i-osteo-trophy): ukondla kweethambo zamathambo.
Amazwi aqala nge: (troph-)
I-Trophallaxis (tropho-allaxis): utshintshiselwano lokutya phakathi kwezinto eziphilayo okanye iintlobo ezahlukeneyo. I-Trophallaxis ibonakala inambuzane phakathi kwabantu abadala kunye nezibungu.
I-Trophobiosis (tropho-bi- osis ): ulwalamano olunxulumene nolunye uhlobo oluthola ukutya kunye nolunye ukhuseleko. I-Trophobiosis ibonwa ngokubambisana phakathi kwezinye iintlobo zeentlobo kunye nezinye iifukisi. Izintuthwane zikhusela i-aphid colony, ngelixa i-aphid ivelisa i-honeydew kwi-ants.
I-trophoblast (tropho- blast ): isalathisi sangaphandle se-blastocyst edibanisa iqanda elikhulelweyo kwisibeleko kwaye kamva likhula kwi-placenta. I-trophoblast inikeza izondlo kwi-embryo ekhulayo.
I-trophocyte (trophocyte): nayiphi na iseli ebonelela ukutya okunomsoco.
I-trophopathy (tropho- pathy ): isifo ngenxa yokuphazamiseka kwesondlo.
I-Metal Cryst Photo Gallery
I-Carbon Dioxide i-Molecular Formula
I-Snakeskin: iMicrosoft Magic
Yintoni iCandelo le-NCAA I, II okanye i-III lithetha?
I-consejos para la carta de invitación para visitar Estados Unidos
IiNtsholongwane zesiLatini zeSigqibo sokuQala kwesiBini
URutherford B. Hayes - UMongameli we-19 we-United States